iphepha VCI ngokuba nobhedu - China Ma Anshan Steel Packaging
iphepha VCI for ayoni
iphepha VCI ngokuba nobhedu
VCI elula film
iphepha crepe VCI
iphepha VCI ngaplastiki ngelaphu ephothiweyo
PE camera non-yokwaluka
iphepha VCI for izinto zobhedu -Eco-lula, enoqoqosho ezintsha ukuphakheja anti-umhlwa Kukho iindidi ezimbini imbonakalo iphepha flat nephepha crepe. Iphepha crepe azisongele sheet metal elimxinwa. Oko kunokuthintela kuxwebhu ubhedu discolor umhlwa. iphepha VCI ingaveliselwa imigangatho intlanganiso JIS Z 0321-1997 "iphepha VCI ngokuba nobhedu and ingxubevange layo". Ezishicilelweyo iphepha VCI iyafumaneka. amaphepha VCI MPTE xa endaweni ngokupheleleyo imfuno iindlela zokukhusela umhlwa oqhelekilyo ...
Ubungakanani Min.Order: 100-500 Kum
Supply Amandla: Iitoni 2,000 ngenyanga
izinto zokubopha anti-umhlwa -Eco-lula, iyenoqoqosho ezintsha
Kukho iindidi ezimbini imbonakalo iphepha flat nephepha crepe na. Iphepha crepe azisongele sheet metal elimxinwa. Oko kunokuthintela kuxwebhu ubhedu discolor umhlwa. iphepha VCI ingaveliselwa imigangatho intlanganiso JIS Z 0321-1997 "iphepha VCI ngokuba nobhedu and ingxubevange layo". Ezishicilelweyo iphepha VCI iyafumaneka.
amaphepha VCI MPTE xa endaweni ngokupheleleyo imfuno iindlela zokukhusela umhlwa eziqhelekileyo ezifana kukutyeba neoli abashiya iintsimbi amafa asele okanye imiyolelo simahla yaye ukulungele ukuyisebenzisa. zamacandelo akho, oomatshini kunye namalungu zesinyithi pre-lamanga carbon zentsimbi kunye bamphosela-yentsimbi zingalula kunye neendleko isongelwe ngempumelelo umhlwa free.
abalinganiswa imifuziselo iphepha VCI:
◆ imisebenzi kabini nokumelana inhibitor umphunga zoqhagamshelwano umhlwa inhibitor
◆ Need neoli antirust idyasi, ukusebenza ngempumelelo, ukonga yabasebenzi.
◆ isakhiwo ezizezinye, ukuba amandla ezahlukeneyo
◆ ukhuselo-ixesha Long wobhedu, nobhedu aluminium zabo.
◆ Ukukhuselwa zesinyithi ukusuka umhlwa ngexesha zokuhamba
◆ Interim ukugcinwa iinxalenye ebuntsimbi phakathi amanqanaba ahlukeneyo woveliso
◆ Njengoko asi okanye yokugoqa ngamnye amalungu
◆ ukwandisa umjikelo wobomi imveliso amacandelo zalo kunye noomatshini
◆ Ukuze sibe nokusingqongileyo kunye neendleko-efanelekileyo
MPTE kaThixo enkungwini umhlwa inhibitor VCI Amaphepha ziyafumaneka ezininzi iinketho ukunceda ukuhlangabezana neemfuno zakho;
Iphepha Flat, Rolls ngokobungakanani okukhethwayo
Ezisenokwandiswa, iinguqulelo creped, waqinisa okanye ngaplastiki, polyethylene (eBhayi) camera
ubunzima Various (60 -300g / m2)
Ambala, asi, ifaka ukuba iingxowa
izisombululo ezithile Customer afana neebhodi, VCI akwazi, njl
iphepha wax kunye nezinye isithintelo ezizodwa iphepha wawutyabeka ukubonelela ukhuseleko engakumbi.
Ngokutsho amandla kunye nolwakhiwo izinto zokubopha, kuquka:
VCI // iphepha Flat okwakhiwa cala
pack jikelele manzi
VCI // iphepha Flat okwakhiwa cala // PE ifilimu
pack Heavy manzi
VCI // Flat iphepha okwakhiwa cala // PE film // eBhayi iye
VCI // Flat iphepha okwakhiwa cala // PE film // PE ephothiweyo // PE ifilimu
VCI // crepe iphepha okwakhiwa cala
VCI // crepe iphepha okwakhiwa cala // PE ifilimu
VCI // crepe iphepha okwakhiwa cala // PE film // eBhayi iye
A dvantages amaphepha umphunga umhlwa Inhibitors VCI MPTE esithi:
ukonga inkampani yakho
nokumelana ezinokuthenjwa ukhuselo lwexesha simahla yaye elide ngakubhalileyo ngokoluhlu olubanzi iimveliso zakho
Akukho kwezendalo, impilo okanye ukhuseleko iingozi
izicelo ezilula kunye olukhuselekileyo
Uthembeke olungele ingcebiso kwiqela lobugcisa MPTE, kunye uluhlu olubanzi iimveliso kunye iinketho ukuhlangabezana neemfuno zakho ethile
Ivunywe abenzi jikelele kwi-ekwenziweni sentsimbi, aluminiyam, Ushishino lweemoto
Okulandelayo: iphepha VCI for ayoni
Antirust Steel evala VCI okwakhiwa Paper
IHDPE elaminethiweyo VCI Paper
PE Camera VCI Anti-Rust okwakhiwa Paper
Okuye kwabethelelwa VCI Crepe okwakhiwa Paper
Okuye kwabethelelwa VCI Paper For Plate Steel
Okuye kwabethelelwa VCI Amaphepha Nge PE / PP Laminations
VCI Rust othintelo Iphepha For abaza kuzisebenzisa
Manzi Steel evala Paper
uqhagamshelwano lwetshiphu emsebenzi-amandla ukuzolula film
PE iphepha crepe isale
VCI PP Kumgca film ephothiweyo